ILoft yeSoHo Duplex etshiswe lilanga
ENew York, New York, United States
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAndrew
Isanda kulungiswa, le soho duplex loft inegumbi lokuhlala elinobude obuphindwe kabini (20ft), izitena eziveziweyo, indawo yomlilo esebenzayo kunye nezixhobo eziphezulu zombane (i-Sub-Zero, iMiele), ukulungiswa (iLefroyBrooks, uLindsey Adelman) kunye nefenitshala (B&B Italy).
Ikhaya elimangalisayo lezigidi ngezigidi zeedola elinoyilo oluvulekileyo olunobude obuphindiweyo iisilingi zeenyawo ezingama-20 kunye neefestile. I-1200 sq ft duplex ene-1 master bedroom, iindwendwe ze-mezzanine / iofisi yasekhaya, kunye neebhafu ezi-1.5. Ikhitshi ehlaziyiweyo w/ Sub-Zero, Miele, Bosch, kunye nezixhobo zeGaggenau. Udonga lwezitena eziveziweyo, indawo yomlilo esebenzayo, kunye nomgangatho weplanga yeemaple. Indawo yesiko le-walnut bar enewayini kunye neefriji zeziselo kunye nokugcinwa kwewayini. Umgangatho ogcweleyo ongaphezulu ubonisa igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elikhulu eliqhagamshelwe kwiofisi evaliweyo yasekhaya / igumbi lokulala le-2 lendawo ye-mezzanine. Inkosi inebhedi enkulukazi, i-mezzanine/loft inewele.
IApartment eSleek isanda kulungiswa amathumbu, kwaye ineempawu eziphezulu zefenitshala kunye nezixhobo. Ukukhanyisa nguLindsey Adelman, uTom Dixon, uGabriel Scott kunye neFLOS. Ukulungiswa kwegumbi lokuhlambela nguLefroy Brooks. I-70" 4k HDTV ene-AppleTV. I-Sonos ifakwe iintambo kuyo yonke indawo. Iwasha / isomisi kwiyunithi.
4.93 out of 5 stars from 16 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-16
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi16
Indawo ephambili-ime kwibhloko ethe cwaka kumda osentshona we-SoHo, le ndlu kukuhamba imizuzu embalwa ukuya kwiivenkile zaseSoHo, iikhefi/iindawo zokutyela kunye neebhari kwi-West Village kunye ne-TriBeCa.
Umbuki zindwendwe ngu- Andrew
Ukongeza kokufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo malunga neyunithi, sinokubonelela ngeenkonzo ze-concierge ukwenza isidlo sangokuhlwa kunye neengcebiso zomsebenzi.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R23902
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- New York